​तीन कोइरालाबाट देउवालाई चुनौती
Tuesday,5Sep, 2017 12:30 PM
आलोक नेपाली । कुनैबेला वीपीपुत्र डा. सशांक कोइराला, गिरिजाप्रसादपुत्री सुजाता कोइराला र केशवपुत्र डा.शेखर कोइरालाबीच पानी बाराबारको अवस्था थियो । तीनै जना कहिले तीनतर्फ हुन्थे त कहिले दुईजना एकातर्फ एकजना अर्कोतिर सम्म हुन्थे । गिरिजाप्रसाद कोइराला शक्तिमा हुँदा सुजाता सर्वशक्तिमान थिइन् । काँग्रेसका अधिकांश नेता कार्यकर्ता उनको दैलोमा पुग्थे । सुशील कोइराला शक्तिमा आएपछि अवस्था बदलियो । डा.सशांकलाई सुशीलले महत्व दिए । सशांकको दैलोमा काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताको भीड बढ्न थाल्यो । तर, सुशीलको निधनपछि तीनजना कोइराला तीनतर्फ हुँदा कोइराला परिवार कमजोर हुनपुग्यो । काँग्रेसभित्र कोइराला परिवारसँग नजिक रहेकाहरूमध्ये कतिपयले समूह छाडेर शेरबहादुर देउवा र कृष्णप्रसाद सिटौलाको छहारी खोजे । केहीचाहिं कोइरालाहरूसँग नजिक रहेर रामचन्द्र पौडेल निवास धाउन थाले ।
कोइरालाहरू तीनतर्फ भएपनि महामन्त्रीमा सशांकले जिते । कतिपयले सशांकलाई भावी सभापतिका रूपमा समेत लिएका छन् । तर, कोइराला परिवारका तीनजना सदस्यबीच मेल नहुँदा शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेललाई पछाडि पार्न सहज नभएको यथार्थ तीनजना कोइरालाले बुझेका छन् । परिणामस्वरुप तीनजना कोइराला एक भएका छन् । कोइरालाहरू एक भएको सन्देश प्रवाह गर्न सुजाता कोइरालाले फेसबुक स्टाटसमार्फत् साथमा लन्च गरेको तस्वीर राखिन् । त्यसपछि पनि उनीहरूबीच लगातार भेट भएको तस्वीर सार्वजनिक भएको छ । यसले काँग्रेसभित्रको शक्ति समिकरणमा फेरबदल आउन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
नेपाली काँग्रेसको पार्टी सभापतिमा विजयी हासिल गरेपछि शेरबहादुर देउवाले पकड झन् बलियो बनाउँदै लगे । सुशील निकटहरूलाई समेत आफ्नो पक्ष बनाएका उनले निर्णय गर्दा समेत काँग्रेसका इमान्दार र लामो समय पार्टीका लागि बिताएकाहरूलाई पाखा लगाए । कोइरालाहरूसँग नजिक रहेकाहरू तारोमा परे । यतिसम्मकी महामन्त्री सशांकलाई समेत बेवास्ता गरेर निर्णयहरू लिन थाले । यसलाई कोइराला परिवारले आफ्ना बाबु बराजुको इतिहासलाई समेत मेट्ने गरी कदम चाल्न थालेको घटनाका रूपमा बुझ्न थाले । डा.शेखरले देउवालाई शुरू देखि नै चुनौती दिदै आएका थिए । उनले देउवाबाट काँग्रेसको हित नहुने तर्क गर्दै आन्तरिक प्रतिपक्षीको नेताका रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै आए । देउवाको हरेक कमजोर कदम र गल्तीलाई तत्काल औल्याएर प्रतिक्रिया दिनेमा शेखर नै देखिदै आएका छन् । सुजाताले चाहिं देउवाले आफ्ना पिता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको योगदानलाई बिर्सन खोजेको र इतिहास मेट्न खोजेको अर्थमा चुनौती दिदै आएकी छिन् । पार्टीभित्र सबैभन्दा प्रभावशाली महिला भएर पनि अवसर नदिएकोमा सुजाता आक्रोशित छिन् । देउवाबाट तीनजना कोइराला आक्रोशित हुनुको परिणामले उनीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याइपु¥यायो ।
देउवाले तीनजना कोइरालाबीच बेमेल भएको लाभ लिएका थिए । पार्टी सभापति जित्दा समेत तीनजना कोइराला तीनतर्फ थिए । जतिबेला उनीहरूबीचको देखावटी एकता सार्वजनिक भयो त्यतिबेला निकै ढिलो भइसकेको थियो । वास्तविक एकता नहुँदा कोइराला निकटहरू समेत देउवालाई सभापति जिताउने पक्षमा पुगेका थिए । देउवाले कोइरालाहरूबीच फुट रहेको ठानेर उनीहरूलाई निकै कमजोर देखे । निर्णय गर्दा बेवास्ता गरे । यतिसम्मकी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समेत आफू निकट रहेका कोइरालाहरूलाई महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा बेवास्ता गरे । कोइरालाहरूले परिवारको राजनीति मात्र नभई काँग्रेसकै राजनीति संकटमा पर्न सक्ने देख्न थाले ।
शेरबहादुर देउवाले एकपछि अर्को अलोकप्रिय क्रियाकलाप गरे । स्थानीय चुनावको मुखमा उनी विवादमा परे । आइजीपी नियुक्ति देखि प्रधान्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाइएको घटना सम्ममा देउवाको भूमिका विवादमा प¥यो । राजदूत नियुक्तिमा पैसाको खेल भएको सम्मका विषय खुल्यो । देउवाले सुदुरपश्चिम बाहेकलाई मतलब नगरेको भन्दै काँग्रेस कार्यकर्ता कोइरालाहरूलाई भेटेर असन्तुष्टि पोख्न थाले । देउवाको अलोकप्रीयताका कारण स्थानीय चुनावको दुई चरणमा काँग्रेस दोस्रो चरणमा पुग्यो । आफ्नै नेतृत्वको सरकार हुँदा समेत दोस्रो स्थानमा पुग्नु सामान्य विषय थिएन । त्यसमाथि देउवाको गृहक्षेत्र सुदुरपश्चिममा समेत काँग्रेस दुई नम्बरमा झ¥यो ।
भारत भ्रमणमा रहँदा देउवाले आन्तरिक विषयलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा बोले । संविधान संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर प्रधानमन्त्रीको पदमा रहेर पालन गर्नुपर्ने मर्यादा र कुटनीतिक सुझबुझ बिर्सिए । देउवाको अभिव्यक्तिप्रति भारतीय अधिकारीहरू समेत असन्तुष्ट भए । उसै त भारतमाथि नेपालमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप लागिरहँदा देउवाको बोलीले भारतलाई समेत अप्ठ्यारोमा पा¥यो । देउवाको यस्तै शैलीले काँग्रेस दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गयो ।
आन्तरिक राजनीतिमा काँग्रेसले माओवादीलाई धेरै दियो । आफ्नो पकड क्षेत्र भरतपुरमा प्रचण्डपुत्री रेणु दाहालका लागि देउवाले आफ्ना कार्यकर्तालाई धकेलिदिए । काँग्रेसले जित्ने निश्चितप्रायः भएको स्थानमा समेत देउवाले प्रचण्डलाई खुशी पार्न चुनावी तालमेल गरेका थिए । भरतपुरलाई भेटीका रूपमा प्रचण्डलाई चढाउनुभित्र देउवाको आन्तरिक राजनीतिमा समेत पकड बलियो बनाउने उद्देश्य निहित थियो । भरतपुर कोइरालाहरूको पकड क्षेत्र थियो । सुशील कोइराला भरतपुरबाट चुनाव जितेका थिए । सशांक छिमेकी नवलपरासीबाट चुनाव जितेका थिए । देउवाले प्रचण्डका लागि भरतपुरमा काँग्रेस कमजोर हुनेभन्दा कोइरालाहरू कमजोर पार्ने रणनीति चालेको विश्लोषण छ । अबको चुनावमा प्रचण्ड र उनको परिवारले चितवनलाई चुनावी क्षेत्र बनाएर आउने सम्भावना देखिइसकेको छ । रेणु दाहालले आफ्नो जीतले आगामी दिनमा बाबु प्रचण्डलाई त्यहाँबाट राजनीति गर्न सजिलो भएको बोलिसकिन् । देउवाको यस्तै भूमिकाका कारण कोइरालाहरू शतर्क मात्र भएनन् त्रस्त समेत भए । राजनीतिक भविष्य जोगाउनका लागि भएपनि कोइरालाहरू एक हुन वाध्य भए ।
काँग्रेसको नेतृत्वमा को ?
शेरबहादुर देउवाले एक कार्यकाल काँग्रेसको सभापतिका रूपमा नेतृत्व लिएपनि अर्को कार्यकाल चुनाव जित्न सजिलो छैन । कोइरालाहरूको एकताले त्यो संकेत गरिसकेको छ । अब उनलाई पुनः सभापति जित्न कोइरालाहरू विभाजित भएमा मात्र सम्भव हुनसक्छ । तर, छ दशक उमेर कटिसकेका कोइरालाहरूले देउवालाई अर्को कार्यकाल सजिलै सुम्पेर कुरेर बसिरहने सम्भावना कम छ । तर, कोइराला परिवारबाट कस्ले देउवालाई चुनौती दिने ? प्रश्न तड्कारो तेर्सिएको छ ।
कोइरालाहरूमध्ये सशांक कोइराला सबैभन्दा शक्तिशाली देखिएका छन् । काँग्रेसका संस्थापक वीपी पुत्र पार्टी महामन्त्री हुनुले पनि उनको प्रभाव बलियो छ । तर, सशांकको स्वास्थ्य राम्रो छैन । उनलाई खासै सक्रिय नहुने नेताको रूपमा लिइन्छ । सशांकमा निर्णय क्षमता पनि देखिएन । सुजातासँग गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरासत मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको ज्ञान पनि छ । तर, देशको तल्लो तहको राजनीतिक अवस्थाको राम्रो हेक्का नराख्ने स्वभाव रहेको बताइन्छ । क्यान्सर संक्रमित भएपछि उनी विगतमा जस्तो सक्रिय पनि छैनन् । शेखर सबैभन्दा सुझबुझ भएका र राजनीतिक चार्तुयता समेत देखाउन सक्ने नेताको परिचय बोकेका छन् । काँग्रेसभित्र उनको लोकप्रीयता रहेको गएको महाधिवेशनमा सर्वाधिक मत ल्याएबाट पुष्टि हुन्छ । तर, तीन कोइरालाले नेतृत्वका लागि एकले अर्कालाई समर्थन गर्ने अवस्था बन्न कठिन छ । कोइरालाहरू जतिसुकै विभाजित भएपनि आफूहरूको भविष्य संकटमा पर्न लाग्दा वा चुनौती बढ्दा एक हुन सक्छन् । त्यसैले कोइरालाहरू एकजुट भएर अबका दिनमा काँग्रेसको राजनीतिमा देउवालाई चुनौती दिनसक्ने सम्भावना देखिदै गएको छ । काँग्रेसबाट आगामी दिनमा देउवाको नेतृत्व कसैले खोस्न सक्छ भने कोइराला परिवारको सदस्यले मात्र सक्ने देखिन्छ ।
​के–के छन् नेकपाको चुनौती
मोदी भ्रमण : माधुर्य कि चातुर्य
​अपराधमैत्री संसद नियमावली
प्रचण्डको मनमा अझै शंका ?
​मोदी भ्रमण अगाडिको तरंग